Booliiska Jarmalka oo shaaciyay magaca iyo muuqaalka wiilkii ka dambeeyay weerarki Munich+Sawirro | shumis.net
Home » ISIS » News » Booliiska Jarmalka oo shaaciyay magaca iyo muuqaalka wiilkii ka dambeeyay weerarki Munich+Sawirro
Booliiska Jarmalka oo shaaciyay magaca iyo muuqaalka wiilkii ka dambeeyay weerarki Munich+Sawirro
Booliiska dalka Jarmalka ayaa shaaciyay magaca iyo muuqaalka wiilkii ka dambeeyay weerarkii dadka badan lagu dilay ee xalay ka dhacay xarun laga adeegto oo ku taala magaalada Munich.
Ali David Sonboly, oo asal ahan ka soo jeeda dalka Iiraan ayaa la sheegay in uu ka dambeeyay weerarkii xalay ka dhacay Magaalada Munich ee lagu dilay 9-qof tiro intaa ka badana lagu dhaawacay.
Booliska gobolka Bavarian ee dalka Jarmalka, ayaa baaritaano ay sameeyeen waxa ay ku sheegeen in weerarkii xalay ka dhacay magaalada Munich uusan wax lug ah ku laheyn Kooxda Daacish oo la tihmayay in weerarkaai ka dambeysay.
Saraakiisha booliska Jarmalka oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay inay baareen gurigii uu deganaa, isla markaana aysan ka helin wax muujinaya inuu xiriir la lahaa ururada argagixisada, laakiin waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in weerarkaasi uu isaga ku koobnaa.
Ali David Sonboly, ayaa ku dhashay magaalada Munich, waxaana looga jiray maskaxda isaga oo ku jiray daryeelid caafimaad. iyadoo kooxaha baarista wada ay sheegayaan inay u malaynayaan inuu weerarkan ku kellifay wareer dhinaca maskaxda ah.
Wiilalkan weerarka geestay ayaa ugu dambeyn la sheegay in uu madaxa iska toogtay, mana jiraan wax muuqaal iyo fariin uu reebay wiilkan oo ku aadan weerarka uu ka geestay xarunta ganacsi ee ku taala Magaalada Munich.
Title: Booliiska Jarmalka oo shaaciyay magaca iyo muuqaalka wiilkii ka dambeeyay weerarki Munich+Sawirro